Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » IBoeing yokwakha uhlobo olusha lwe-drone e-Australia
Airlines • Airport • I-Australia Izindaba Ezintsha • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Izindaba • Abantu • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
I-Loyal Wingman iyindiza yokuqala yamasosha ezokwakhiwa futhi yenziwe e-Australia eminyakeni engamashumi amahlanu. IBoeing Australia njengamanje isathuthukisa izindiza eziyisithupha ngokubambisana neRoyal Australian Air Force.
AbakwaBoeing bethule izinhlelo zokwakha uhlobo olusha lwezindiza zamasosha ezindiza ezingenamuntu e-Australia.
Idrone entsha yamasosha kaBoeing isebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuze isebenze ngokuhambisana nezindiza ezinamadoda.
IBoeing ikhethe idolobha laseToowoomba eQueensland njengendawo yokugcina yomhlangano yezindiza zayo ezingenamuntu zeLoyal Wingman.
Isikhondlakhondla semikhumbi-mkhathi yaseMelika iBoeing isimemezele ukuthi ihlela ukwakha indiza yayo entsha engenamuntu iLoyal Wingman e-Australia.
Ngokusho kukaBoeing, ikhethe idolobha laseToowoomba esifundazweni saseQueensland njengendawo yokugcina yomhlangano yohlobo lwayo olusha lwezindiza zamasosha ezingamabhanoyi. Izindiza zokuqala zokuhlola ziphothulwe ekuqaleni konyaka.
Lesi simemezelo siza ngemuva kwesonto i-United States, i-United Kingdom ne-Australia bememezele umfelandawonye omusha wezokuphepha ezonikeza i-Australia imikhumbi-ngwenya esebenzisa amandla enuzi. Lesi sivumelwano sigxekwe yiChina futhi sikhulise ukungezwani esifundeni sase-Indo-Pacific.
Ngokuvumelana ne Boeing I-Defense Australia, ukuthuthukiswa kwendiza entsha kuhamba ngokohlelo. I-UAV entsha isebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuze isebenze ngokuhambisana nezindiza ezinamadoda futhi yakhulelwa, yaklanywa futhi yathuthukiswa e-Australia.
Yindiza yokuqala yokulwa yamasosha ezokwakhiwa futhi yenziwe e-Australia engxenyeni yekhulu leminyaka. I-Boeing Australia Njengamanje usathuthukisa izindiza eziyisithupha ngokubambisana neRoyal Australian Air Force.
Awekho ama-oda aqinisekisiwe okwamanje, kusho Boeing, kepha uhulumeni wase-Australia ubonakala ezethemba futhi ejabule ngamakhono kaLoyal Wingman.
Idrone entsha izokwakhiwa endaweni eseWellcamp Airport, ephethwe yiWagner Corporation.
Usihlalo weWagner uJohn Wagner uthe unethemba lokuthi indawo yokuvikela kanye nezindiza esikhumulweni sezindiza izoheha izinkampani eziningi emikhakheni efanayo.
Le phrojekthi kulindeleke ukuthi idale amathuba omsebenzi angama-300 ngesikhathi kwakhiwa lesi sikhungo kanye nezikhundla ezingama-70 eziqhubekayo zokusebenza nezokukhiqiza.
UNdunankulu Wombuso waseQueensland u-Annastacia Palaszczuk uthe isimemezelo "yizindaba ezinhle kakhulu" futhi simelela okokuqala iBoeing isungula indawo yalolu hlobo ngaphandle kwaseNyakatho Melika.
IBritish Izindiza ibuyela eBudapest neLondon ...
Amaphoyisa amise ukwesaba eMombasa, eKenya, a ...